Nanatrika avy hatrany ny fivoriana tsy ara-potoanan’ireo filoham-pirenena sy governemanta notarihan'ny filohan'i Rwanda sady filoha nitantana ny Vondrona Afrikanina tamin’ny taona 2018, Paul Kagame ity filoha Malagasy ity. Niompana indrindra tamin'ny "fanavaozana ny rafi-pitantanana ny Vondrona Afrikanina", ny " zone de libre échange", ny "fampiharana sy fanatanterahana ny fanapahan-kevitr'ilay fihaonambe tao Cotonou" ary farany ny" fifidianana ny biraon'ny kaonferansan'ny Vondrona Afrikanina amin'ny 2019 sy ny fifidianana ny filohan'ny Vondrona Afrikanina amin'ny taona 2020 " ny fotoam-pivoriana voalohany omaly. Nandritra io fivoriana io nahavoafidy ny filohan’i Afrika Atsimo Cyrille Ramaphosa hitantana ny Vondrona Afrikanina amin’ny taona 2020. Taorian'izay dia nanatrika ny lanonana fanokanana ny sarivongan'i Emperora Haile Selassie ny filoham-pirenena Malagasy. Ny Emperora Haile Selassie dia nanjaka nanomboka tamin'ny 1930 ka hatramin'ny 1974 ary anisan’ny endrika lehibe eo amin’ny kolontsaina Etiopianina. Natsangana teo anoloan'ny foiben'ny Vondrona Afrikanina ao Addis-Abeba moa izany. Nandritra ny lanonam-panokafana ofisialin'ny fihaonambe no nandray fitenenana ny filoha Andry Rajoelina izay nisaotra ny Vondrona Afrikanina tamin’ny tan-tsoroka tamin’ny fifidianana. Nambara fa dingana demokratika vita tao anatin’ny fitoniana no modely eran’ny kaontinanta Afrikanina isika. I Andry Rajoelina ankehitriny no filoham-pirenena Afrikanina am-perinasa tanora indrindra.